BILAABIDDA TILMAAMAHA ICHIMOKU KINKO-HYO
KU BILAABASHADA TILMAAMAHA ICHIMOKU KINKO-HYO
Sidee uga ganacsataa suuqyada maaliyadeed? Miyaad ku darto tilmaamayaasha tilmaamayaasha oo aad dhammeysaa ka wareer badan sidii hore?
Ka waran haddii aan kuu sheego inaad ku falanqeyn karto suuqyada hal tilmaame?
Ka warran haddii aan kuu sheego inaad u rogi karto mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu adag ma awood badan tahay oo si sahlan loo isticmaali karo hub si lacag looga sameeyo suuqyada maaliyadeed?
Ku soo dhawoow BILOWGA tusaha ICHIMOKU KINKO-HYO
Hadafkayga kama dambaysta ah ee koorsadan hordhacu maaha inaan ku baro tilmaame kale oo laga yaabo inaad ku haysato shaxdaada. Hadafkaygu waa inaan ku siiyo istiraatiijiyad macquul ah kaas oo aad ka codsan karto in aad suuqyada kaga ganacsato kalsooni.
KU BILAABASHADA TILMAAMAHA ICHIMOKU KINKO-HYO Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Qarnigii 18-aad: dagaalka iftiinka
horeCoronavirus: Caawiyayaasha guryaha waa inay shaqeeyaan? Maxaa caawimaad ah iyaga?
socdaAasaaska maareynta mashruuca: Khataraha
Liistada qaaska ah ee Excel 2010
Dedeji xawaaraha bartaada wordpress ee seo iyo inbadan
ANSSI waxaa ka go'an in ay horumariso madaxbanaanida dhijitaalka ah ee EU inta lagu jiro PFUE
Wax ka baro Sayniska Xogta iyo caqabadihiisa